पुरानो नोट बेचौ लखपति बनौं ! यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! सेयर गरौँ भएकाले eBay मा बेचौं ! – Buddha Khabar
जिस्म २’निर्माण हुने,अर्चनालाई टक्कर दिन आइन रेजिना
घर किन्दा श्रीमती सित्तैमा, तर पनि पाएनन् ग्राहक !
Author BUDDHA KHABARPosted on November 15, 2018 November 15, 2018 93	0
आफ्नो व्यापार प्रवर्धनका गर्नका लागि व्यापारीले अथवा कर्पोरेट हाउसले विभिन्न खालका आर्कषक अफरहरु ल्याउँछन् । एउटा सामान किन्दा अर्को सामान सित्तैमा भन्ने अफरलाई चनौती...
Author BUDDHA KHABARPosted on November 16, 2018 38	0
फिल्म जिस्मको पछि यसको सिक्वेल ‘जिस्म २’निर्माण हुनेभएको छ । यति बेला सिक्वेल ‘जिस्म २ पोखरामा धमाधम छायांकन भई रहेको छ । चलचित्र ‘जिस्म’को...
गायिकाले केरा खाएपछि प्रहरीले गिरफ्तार
Author BUDDHA KHABARPosted on November 14, 2018 31	0
गायिकाले आफ्नो म्युजिक भिडियोमा उत्तेजक तरिकाले केरा खाएपछि उनलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। गिरफ्तारपछि गायिका शायमालाई जेलको सजाय पनि हुनसक्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।...
नायिका स्वेता खड्कामाथि फेरि अर्को बज्रपात, लेखिन–फेरि पनि हाम्रो खुशी लुटेउ भगवान, भगवान अझै पनि भन्छु दुख दिन मन छ भने एकैचोटि देउ पटक-पटक गारो भयो हामीलाई सहन
Author BUDDHA KHABARPosted on November 15, 2018 34	0
काठमाडौं । नायिका स्वेता खड्कामाथि फेरि अर्को बजपात परेको छ । केही वर्षअघि चर्चित अभिनेता पति श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई गुमाएकी खड्काले अहिले अभिभावक सरहका आफ्ना...
कक्षा १२ मा पढ्ने १७ बर्षिया किशोरीले यस्तो हर्कत, जुन थाहा भएपछी सबै परे तीन छक !
Author BUDDHA KHABARPosted on November 14, 2018 115	0
काठमाडौं। १२ मा पढ्ने १७ बर्षिया किशोरीको रहस्य थाहा पाए पछि सबै चकित मङ्गलवार राजधानीको बसुन्धरामा गुल्मीकी एक युवतीलाई आफू डेरामा बस्दैं आएको घरबाट...